FIKASANA FAMORIAM-BAHOAKA: Hiakatra fitsarana ny fandravana didy. | Canalnews Madagascar
Home A LA UNE FIKASANA FAMORIAM-BAHOAKA: Hiakatra fitsarana ny fandravana didy.
FIKASANA FAMORIAM-BAHOAKA: Hiakatra fitsarana ny fandravana didy.
By Nirinaaoût 23, 2017, 01:38 0
Anio 23 Aogositra 2017 amin’ny 09 ora sy sasany no hiakatra fitsarana ny fitoriana napetraky ny Forces de Changement momba ny fandravana ny didy (sursis à execution) navoakan’ny Prefektiora an’Antananarivo Renivohitra. Tsy nanaiky ny famoriam-bahoaka izay saika natao tao amin’ny kianja Mitafo Mahamasina ny Prefet. Taorian’ny filazana izany, nametraka fitoriana handravana ny didy izay mifanaraka amin’ny lalana 2001-025, laharana faha-69 ny solon-tenan’ny Forces de Changement niaraka tamin’ny mpitarika azy, Doudou.
Tsy tontosa ny hetsika izay nokasaina natao na dia niziriziry tamin’ny heviny aza ny Forces de Changement fa tsy maintsy tanteraka izany. Miankina amin’ny didim-pitsarana hivoaka rahampitso ny fitohizan’ny hetsika.
Previous PostMASTER IMMO: Mivarotra tany azo aloa tsikelikely ny vidiny. Next Post4G ORANGE: Hanampy ny fampiroboroboana ny fandraharahana any Antsiranana.